64yr old man set to wed 18yr old girl from ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ by peter kyaw | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » 64yr old man set to wed 18yr old girl from ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ by peter kyaw
64yr old man set to wed 18yr old girl from ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ by peter kyaw
Posted by zinmyotun on Nov 10, 2010 in News, World News |7comments
ယူအေအီးက အသက် ၆၄ နှစ် အမျိူးသားက အသက် ၁၈ နှစ်ကလေးကိုယူဦးမည်
ယူအေအီးနိုင်ငံရဲ့ လူစွမ်းကောင်း သားသမီးများစွာတို့ ရဲ့ ဖခင်အမျိူးသားတစ်ဦးဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ
သားသမီးအယောက် ၁၀၀ ပြည့် နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နောက်ထပ် မိန်းမထပ်ယူရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်
ခြေထောက်တစ်ဖက်သာရှိသည့်သားသမီး ၈၈ ယောက်တို့ ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ အသက် ၆၄ နှစ်ရှိ ဒါ့ တ်မူရက်
အဗ္ဗဒူရာမန် ဟာ အသက် ၁၈ နှစ်မျှသာရှိသေးသည့်အိုင်ရှာ ကလေးနှင့် လာမည့် အစ်ပွဲတော်အပြီး နိုဝင်
ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ မှာ ဂျိူင်ပူရ် မြို့ မှာ လက်ထပ်တော့ မှာဖြစ်ပါတယ်…
ကမ္ဘာမှာ ၁၀၀ ပြည့် ရမယ်လို့ …
အဲမရိတ်၂၄သတင်းစာမျက်နှာကို ရာမန် ကပြောကြားခဲ့ ရာမှာ ” လက်ထပ်ပွဲကို ၎င်းရဲ့ အိန္ဒိယ ဆရာဝန်က
စီစဉ်တာဖြစ်ပြီး သတို့ သားကနေ သတို့ သမီးဖခင်ကို တင်တောင်းတဲ့ ငွေကတော့ယူအေအီးငွေ ဒါဟန်း
၂ သောင်း ( ဒေါ်လာ ၅၄၃၄ ) ဖြစ်ပါတယ်…လက်ထပ်ပွဲကို ဂျိူင်ပူရ်မြို့ မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်…” လို့ ဆို
ယူအေအီးနိုင်ငံ၊ အဂျမန်ပြည်နယ် ( အဂျမန်မြို့ ) နှင့် မနာမာ မြို့ များမှာနေထိုင်တဲ့ ရာမန် မှာ သားယော
ကျာင်္းလေး ၅၀ နှင့် သမီးမိန်းကလေး ၃၈ ယောက်တို့ ရှိခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်…
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က ဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ မတော်တစ်ဆမှုတစ်ခုမှာ သူ့ ရဲ့ ခြေထောက်တစ်ချောင်းဆုံးရှုံး
သူ့ ရဲ့ သားအကြီးဆုံး တာရစ် ကအသက် ၃၉ နှစ်ရှိပြီး အငယ်ဆုံးကလေးကတော့ လအနည်းငယ်မျှအရွယ်
” သားသမီး အယောက် ၁၀၀ ရယင်တော့ မိန်းမထပ်မယူတော့ ပါဘူး…အခုယူမယ့် မိန်းမနဲ့ အယောက်
၁၀၀ ပြည်အောင် ( ကလေး ၁၂ ယောက် ) မွေးနိုင်လိမ့် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်…” လို့ သူက ဆိုခဲ့ ပါတယ်…
အသက် ၆၀ ကျော် သက်ကြားအိုတဏှာရူးကြီးဟာ သူ့ ရဲ့ သတို့ သမီးအသစ်ကလေးအကြောင်းပြောတော့ 
သူ့ ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို မဖုံးကွယ်နိုင်ခဲ့ ပါဘူး….
” ကျူပ်ကတော့ အခုလုပ်မယ့် မင်္ဂလာပွဲကို တော်တော်ရင်ခုန်နေတာ…သူကလေးက သိပ်လှတဲ့ မိန်းကလေး
ဖြစ်ပါတယ်….သူ့ ကိုဓါတ်ပုံထဲမှာမြင်ဘူးတယ်လေ…ပြီးတော့ သူ့ ကိုဖုံးထဲကနေလည်းစကားပြောခဲ့ ရသေး
လက်ထပ်ပွဲလုပ်ဖို့ အိန္ဒိယကိုသွားဖို့ ကျူပ် ဗီဇာလျှောက်ပြီးပြီ….အစ် ပြီးတာနဲ့ အိန္ဒိယကို သွားဖြစ်မှာသေချာ
” ကျူပ်မိသားစု အိမ်မှာတော့ ကျူပ်မင်္ဂလာဆောင်တိုင်းဟာ ပွဲတော်ပါပဲ…ကလေးတွေက အင်္ကျီအ၀တ်အ
စားအသစ်တွေ၊ သကြားလုံးတွေ၊ လက်ဆောင်တွေ ရကြတယ်လေ…သိုးကလည်း အနည်းဆုံး လေးကောင်
လက်ထပ်ပြီး ရက်သတ္တပါတ်အနည်းငယ်အတွင်း သတို့ သမီးကို အဂျမန် ကိုခေါ်လာခဲ့ မှာဖြစ်တယ်..” လို့ 
သူက ထပ်ပြီးပြောပြခဲ့ ပါတယ်…
အသက် ၆၄ နှစ်ရှိတာတောင် အနားမယူနိုင်သေးဘူး…
ရာမန်ကတော့ သတင်းဌာနေတွေက သူ့ ရဲ့ အကြောင်းဖော်ပြတာကို ဂုဏ်ယူဝင့် ကြွားနေပါတယ်…
၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ သူ့ ရဲ့ အကြောင်းကို အဲမရိတ်ယနေ့ သတင်းစာမှာဖေါ်ပြခဲ့ ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့တိုးပွား
လာနေခဲ့ တဲ့ သူ့ ရဲ့ မိသားစုအကြောင်းကိုတော့နိုင်ငံတကာရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့“ဧရာမ မိသား
စုကြီးများ” မှာ တင်ဆက်ဖေါ်ပြခဲ့ ပါတယ်….
” ကျူပ်အကြောင်းကို သူကလေးက တီဗီအစီအစဉ်တွေမှာ မြင်တွေ့ ပြီးကတည်းက ဇနီးအသစ်ကလေးက
ကျူပ်ကို အထင်ကြီးနေတာ….ရုပ်သံလိုင်းတော်တော်များများကလူတွေကလည်း အိမ်ကိုလာပြီး ကျူပ်ကို
အင်တာဗျူးကြ၊ မိသားစုဝင်တွေကို ရိုက်ကူးကြနဲ့ လုပ်ကြပါတယ်…” လို့ သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်….
” ကျူပ်တို့ ကတော့ အစ်ပွဲတော်တစ်ခု လုပ်ပြီးပြီး၊ နောက်ထပ်အစ်ပွဲတော်အတွက် မိသားစုကလည်းကျင်း
ပဖို့ အဆင်သင့် ပါပဲ….သတို့ သမီး၊ ဇနီးအသစ်ကလေးကတော့ ပွဲတော်ရာသီဆင်ယင်ကျင်းပမယ့် မိသား
စုအတွက် နောက်ထပ်ရောက်လာမယ့် ပျော်ရွှင်စရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်….” လို့ သူကထပ်ပြောပြပါတယ်….
ရာမန်ဟာ ယူအေအီးတပ်မတော်က ပင်စင်စားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ အစိုးရထံမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုများ၊ နေ
ထိုင်စရာ အိုးအိမ်စတဲ့ အထောက်အပံ့ များကိုလည်း အခမဲ့ ရရှိနေပါတယ်…
မိသားစုဝင် ၁၂၇ ယောက်ရှိတဲ့ သူ့ ရဲ့ မိသားစုကြီးဟာ ယူအေအီးနိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တွေအနှံ့ အပြားမှာ အိမ်
ထောင်စု ၇ စုနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်…
သူ့ ရဲ့ သားသမီးအများစုဟာလည်း ယူအေအီး စစ်တပ်၊ ရဲ တပ်ဖွဲ့ စတဲ့ အစိုးရအလုပ်အကိုင်၊ ရာထူးကောင်း
များမှာ အလုပ်ရနေကြပြီး တစ်ဦးကတော့ ယူကေ ( အင်္ဂလန် ) မှာ စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်နေပါတယ်…
သူဟာ လက်ထပ်ခဲ့ တာ ၁၅ ကြိမ်ရှိခဲ့ ပေမယ့် လောလောဆယ်မှာတော့ သူ့ မှာမိန်းမသုံးယောက်ပဲရှိပြီး ကျန်တာတွေက ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
ဒါပေမယ့် လည်း သူ့ ရဲ့ ဇနီးမယားဟောင်းတစ်ချိူ့ ဟာ သူနဲ့ အတူနေကြပါသေးတယ်တဲ့ ….
( သူတို့ ဆီမှာက သူ့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် လက်ထပ်ယင် တိုက်ခန်းတစ်ခု၊ ကားတစ်စီးအစိုးရက လက်ဖွဲ့ 
တယ်၊ ထောက်ပံ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်…သူတို့ နိုင်ငံသားလူဦးရေများအောင်ပေါ့ ….
အမျိူးသားများကတစ်ခြား မည်သည့် နိုင်ငံသူကိုမဆို ယူခွင့် ရှိပေမယ့် ထိုအမျိူးသမီးများကတော့ အစ္စလမ်
ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကြရပြီး ယူအေအီးသူများကတော့ တစ်ခြားနိုင်ငံသားဆိုယင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်
ဖြစ်တာချင်းတူ၊ အာရပ်နိုင်ငံသားများပင် ယူအေအီးနိုင်ငံသားမပေးပါဘူး…လူမျိူးခြား၊ ဘာသာခြားဆိုယင်
တော့စိတ်တောင်မကူးလေနဲ့ ပဲ…သိလို့ ကတော့ ဘမောင်ဘွားများက သတ်ပြစ်တာပါပဲ…
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းကလေးများ သူများဘာသာဝင်တွေကို အတုယူဖို့ သိပ်ကောင်းပါတယ်…)
ခြေထောက်တစ်ချောင်းပဲရှိပေတော့ လို့ ပါပဲ…နှစ်ချောင်းလုံးသာရှိယင်တော့ …မလွယ်…
အရပ်စကားနဲ့ ပြောရယင်တော့ လက်လံတယ်၊ ခြေခွင်တယ်၊ ပေါင်ကားတယ် ….ဆိုရမလိုပါပဲ…
UAE’s ‘superdad’ is all set to tie the knot again, with the aim of fathering 100 children before 2015.
A one-legged father of 88 children, 64-year-old Daad Murad Abdul Rahman will marry 18-year-old Aisha in Jaipur after Eid Adha (Hari Raya Haji) on Nov 17.
Speaking to Emirates24.com, Rahman said: “The wedding was arranged by his Indian doctor. Meher (money bridegroom pays the bride’s father) has been fixed at Dh20,000 (RM 16, 847) and the nikkah (wedding] will be held in Jaipur.”
Rahman, who lives in Ajman and Manama in UAE, has 50 boys and 38 girls. He lost one leg in an accident several years ago.
The eldest son Tariq is 39 years of age and the youngest isafew months old. “I will stop marrying when I have 100 children. I hope to achieve that with this marriage.”
The sexagenarian could not conceal his excitement when asked about his new bride.
“I’m thrilled about my wedding. She isapretty girl. I have seen her photograph.”
“I speak to her over the phone. I have applied for visa to visit India for the marriage. Most probably, I will leave for India after Eid.”
“Every marriage isacelebration in our family as children get new clothes, sweets and gifts. We will have to cut at least four sheep for the festivities.
I will bring the new bride to Ajmanafew weeks after the marriage,” he added.
Rahman takes pride in the media coverage he receives. First featured in ‘Emirates Today’ way back in 2007, his growing family was later on ‘Big Families’ an international TV programme. “My new wife is impressed because she has already seen me on TV channels. Several TV people have come to my house to interview me and shoot my family members,” he said.
“We have just celebrated one Eid and the family is getting ready for the next Eid. The new bride will add more flavour to the festival mood in my family,” he added.
ကျွန်မနဲ့သိတဲ့ ယူအေအီး ကောင်လေးတစ်ယောက်ကလဲ သူ့မှာ မောင်နှမ အယောက် ၄၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ပြောဖူးပါတယ် … သူတို့နိုင်ငံက ချမ်းသာတယ် … ကျွေးနိုင် မွေးနိုင်တာပေါ့ ..
သူတို့ဆီမှာသူ့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် လက်ထပ်ယင် တိုက်ခန်းတစ်ခု၊ ကားတစ်စီးအစိုးရက လက်ဖွဲ့ တယ်၊ ထောက်ပံ့ တယ်လို့ ဆိုနေမှ…သူတို့ နိုင်ငံသားတွေမိန်းမများများယူတာဘယ်ဆန်းပါတော့မှာလဲလေ………ယူသင့်တာပေါ့
တော်သေးတယ် .. အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ လူသွားမဖြစ်တာ။လူ့အခွင့်အရေးလို့အော်နေ
ကြတဲ့ နိုင်ငံတွေအဲ့ဒီမှာသွားမအော်ဘူးလား။သူတို့နိုင်ငံမှာ မိန်းမဖြစ်ရတာ
ကလေးမွေးတဲ့စက်ကြနေတာပဲ … တကယ့်လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာပဲ။
အောက်ဆုံးမှာ ပြောသွားတဲ့ (မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းကလေးများ သူများဘာသာဝင်တွေကို အတုယူဖို့ သိပ်ကောင်းပါတယ်…) အဲဒီစာသားလေးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်…..လက်ရှိအချိန်မှာ တကယ်ကိုလိုအပ်လာနေတာပါ။ ခုဆိုမသိမသာနဲ့ တဖြည်းဖြည်း အမျိုးကပျောက်တော့မယ်…..။
ကလေးမွေးတဲ့စက်ကြနေတာပဲ … တကယ့်လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာပဲ။ ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
အောင်မာ မြန်မာပြည်က မမများ မင်းတုန်းမင်းခေတ်မှာ မမွေးခဲ့ကြလို့ပါ။
ခုခေတ်လို များ လမ်းပေါ်က အလန်းလေးတွေကို မင်းတုန်းမင်းများမြင်လိုက်လို့ကတော့ ကွာ။
မင်းတုန်းမင်းသားသမီးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲဆိုတာ သမိုင်းစာအုပ်လှန်ကြည့်လိုက်မိတော့ ဒီပို့စ်ထဲမှာပါတဲ့ ဒါ့ တ်မူရက် ကို
မင်းတုန်းမင်းကြီးသာ ရှိရင် ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်လို့ ပြောမှာကတော့သေချာပါသဗျာ။